वडाध्यक्षको कर्तुत : कीर्ते नागरिकता बनाएर किसानको जग्गा बिक्री, पोल खुलेपछि फरार !
काठमाडाैं | भदौ २९, २०७८
फोटोमा पीडित किसान गरीब कोहार
नागरिकता सहितका कागजात कीर्ते बनाएर नक्कली जग्गाधनी खडा गरी एक किसानको जग्गा किनबेच भएको रहस्य खुलेको छ ।
रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा नागरिकताको कीर्ते प्रमाण बनाएर गरीब कोहारको नाममा रहेको जग्गा अर्कैलाई बिक्री गरिएको छ ।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष रामजान अली मियाँको सिफारिशमा नक्कली नागरिकता बनाएर गरीब कोहारको नाममा रहेको १० कठ्ठा जग्गा बिक्री गरिएको हो ।
वडाध्यक्ष अलि मियाँ अहिले फरार छन् । कीर्ते कार्यमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको समेत संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ ।
वडा नम्बर १० मधुवनीका ६९ वर्षिय कोहारको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ४८८ मा ९ कठ्ठा १ धुर र कित्ता नम्बर ५०७ मा १ कठ्ठा १६ धुर जग्गा उनको गैरहाजिरीमा गएको फागुन १८ गते बिक्री भएको पाइएको हो ।
उक्त स्थान साविक मधुवनी गाविस वडा नम्बर–६ मा पर्छ ।
गरीब कोहारको नाममा वडाध्यक्षले आफ्ना ससुराले नक्कली नागरिकता बनाएर जग्गा बिक्री गरेको पीडित पक्षको आरोप छ ।
वडाध्यक्षका ससुरा भारतीय नागरिक रहेको बताइएको छ । उनी पनि फरार छन् । जग्गा बिक्री गर्न प्रयोग भएको नागरिकता नक्कली भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीबाट अर्कै फोटो टाँसेर गरीब कोहारकै नाममा प्रथम प्रतिलिपि नागरिकता जारी भएको छ ।
उक्त नागरिकतामा प्रशासकीय अधिकृत तोयनारायण अर्यालको हस्ताक्षर छ । तर, प्रशासनमा भने नागरिकताको प्रतिलिपि लिइएको विवरण नभएको तामाङले बताए ।
प्रशासनमा तोयनारायण नाम गरेका कुनै पनि अफिसर आएका छैनन् ।
पीडित कोहारले वडाध्यक्षले सर्जमिन नक्कली गरेर आफ्नो जग्गा अर्कैको नाममा गरेको बताए । ‘वडाध्यक्षले मियाँले ससुराका नाममा फर्जी नागरिकता बनाएर बनाएर मेरो जग्गा बिक्री गरेछ । ऋण निकाल्न चार किल्ला सिफारिशका लागि वडा कार्यालयमा जाँदा सिफारिश नपाएपछि बल्ल मेरो जग्गा त अर्कैले बिक्री गरिसकेको थाहा पाएँ,’ उनले भने ।
स्थानीय घनश्याम गुप्ताले सबै कीर्ते कार्य वडाध्यक्षकै योजनामा भएको बताए ।
आफ्नो जग्गा नक्कली नागरिकता बनाएर बिक्री गरी बैंकबाट ऋण लिँदासमेत बेखबर बनेका कोहारले आवश्यक छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही र आफ्नो जग्गा पाउनुपर्ने माग गर्दै मालपोत कार्यालय रूपन्देही र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरीसहित उजुरी दिएका छन् ।
जग्गाधनी श्रेस्ताको मोठ र जग्गा धनी पूर्जामा फरक व्यक्तिको फोटो टाँसिएको छ । श्रेस्ता हेर्दा फोटो फेरेर अर्को कुनै व्यक्तिको टाँसेको, नक्कली साइन गरेको र औंठा छाप लगाउँदा तीन चारपटक लगाएर नबुझिने बनाएको देखिन्छ । तर, मालपोतका कर्मचारीले फर्जी कामको पत्ता लगाउन सकेनन् । ७० वर्षका व्यक्तिको ठाउँमा कीर्ते गर्ने व्यक्तिको फोटो ३५/४० वर्ष उमेरको जस्तो देखिन्छ । फोटोलाई कर्मचारीले दाँजेर हेरेको देखिँदैन ।
नक्कली नागरिकता निकालेका व्यक्तिले ६ महिनामा उक्त जग्गा दुईपटक बिक्री गरिसकेको मालपोत कार्यालयको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
२०७७ फागुन १८ गते मदनपोखरा–४ पाल्पा बस्ने सन्दीप कार्कीलाई १९ लाख ६७ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरेको देखिन्छ । सोही जग्गा सन्दीप कार्कीले दुई महिना नबित्दै २०७८ वैशाख १२ गते यशोधरा गाउँपालिका– ८ कपिलवस्तुका गोविन्दप्रसाद मल्लाहलाई एक करोड ९५ लाख रुपैयाँको थैली राखेर बिक्री गरेका छन् ।
मालपोत कार्यालय, रूपन्देहीका प्रमुख केशवराज सुवेदीले वडा कार्यालयको सिफारिश अनुसार नै काम भएको बताउँछन् ।
‘वडा कार्यालयले फोटो राखेर प्रमाणित गरेर यो गरीब कोहार हो भनेर सिफारिश गरेको छ । सिफारिशकै आधारमा हामीले काम गरेका छौं,’ सुवेदीले भने । प्रतिलिपि निकालिएको नागरिकतामा कुनै गल्ती नदेखिएको मालपोतका कर्मचारी बताउँछन् ।
सुवेदीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको रोहबरमा सक्कली जग्गा धनीलाई जग्गा दिलाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए । मल्लाहले ग्लोबल आइएमई बैँकमा जग्गा धितो राखेर डेढ करोड ‘लोन’ समेत लिएका छन् । बैंकका कर्मचारी धितो मूल्यांकन गर्न आउँदा मात्रै वास्तविक जग्गा धनीले गडबडीको संकेत पाएका थिए ।
प्रजिअ तामाङले कीर्ते कार्यमा संलग्न दुई जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको बताए । तर, उनीहरू को–को हुन् भन्ने उनले खुलाउन चाहेनन् ।
प्रजिअ तामाङले लोकान्तरसँग भने, ‘मालपोतमा सम्बन्धित लेखापढी व्यवसायीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएका छौं । मालपोतका कर्मचारी पनि निगरानीमा छन् । तेस्रो कुरा चाहिँ जो जग्गा लिएको मान्छे हो, उसलाई पनि नियन्त्रणमा लिएका छौं । अरू व्यक्तिहरूबारे खोजी भइरहेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता– २०७४ अन्तर्गत अहिले कीर्ते मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान भैरहेको छ ।’
‘नागरिकता हाम्रो सफ्टवेयरमा भिडाउँदा मिल्दैन । त्यो पूरै नक्कली हो । जहाँसम्म होलोग्राम र नागरिकताको फर्म कीर्ते गर्नेले कसरी फेला पार्‍यो भन्ने छ, त्यसमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ,’ प्रजिअ तामाङले थपे ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका इन्स्पेक्टर भास्कर चन्दले फरार वडाध्यक्षको खोजी कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको बताए ।
सानिमा बैंकका ग्राहकले शून्य प्रतिशत मासिक किस्तामा सामसुङको फ्ल्यागसिप स्मार्टफोन खरिद गर्न सक्ने
हातमुख जोर्न खाडीमा मजदुरी गर्ने रामसरोजका नाममा नेपालमा करोडौंको कारोवार भेटिएपछि…
अर्काको नागरिकता दुरुपयोग गरी कम्पनी खडा गरेर करोडौं कारोवार गर्दै राजश्व छलि गर्ने गिरोह नै सक्रिय रहेको पाइएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले राजश्व छलीको विषयलाई लिएर उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरेको मुद्दाले यस्...
यातायात लाइसेन्सको सिस्टममा आइरहने समस्याको नालिबेली : विभागले किन पाएन 'फुल एक्सेस' ?
यातायात व्यवस्था विभागको लाचारी र भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स कम्पनीको दादागिरीका कारण सवारी लाइसेन्ससम्बन्धी सेवा पटक-पटक प्रभावित हुँदै आएको छ । सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नगरे पनि ९० प्रतिशत भुक्तानी प...
भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नम्बर ३ स्थित हनुमन्ते खोलाको छेउमा रहेको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर किनबेच गरेको गुनासो स्थानीयले गरेका छन् । साबिक बालकोट गाविस वडा नम्बर १ को कित्ता नम्ब...
काण्डैकाण्डवाला प्रदीप अधिकारी : क्यानको महानिर्देशक बन्न मन्त्रीदेखि नेताको घर-घरमा !
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक बन्न एक चरम विवादित पात्र दौडधूपमा लागेका छन् । अनियमितताको आरोप र अख्तियारसहितका नियामक निकायमा उजुरीको चाङ रहेका प्राधिकरणका निर्देशक (११ औं तह) प्रदीप अधिकार...
वायुसेवा निगमलाई ऋणको गलपासो: जहाज बेचेर तिर्ने कि सम्पत्ति !
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज किन्न लिएको ऋण ३३ महिनादेखि तिर्न सकेको छैन । निगमले ऋणदाता कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई हरेक तीन महिनामा तिर्नुपर्ने ११ वटा त्रैमासिक किस्त...
बेलगाम संघीयता : जथाभावी मन्त्रालय, अन्धाधुन्ध संरचना, अर्बौं आर्थिक भार
सातै प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर आफूखुशी मन्त्रीको संख्या बढाउँदा राज्यमाथि अर्बौं रुपैयाँ आर्थिक व्ययभार थपिएको छ । एउटा मन्त्रालय थपिँदा त्यसको संरचना, मन्त्री तथा सचिवालय व्यवस्थापन, सवारी साधन, इन्धन तथा प्रशासन...